home Archives - Page2of6- ဒိုးမယ်
Doemal Rebate , Redeem Program ရဲ႕ User Initiated Feature အသစ္
Doemal အက်ပလီကေးရှင်းဆိုတာကတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာနဲ့ ရှာဖွေလို့ရတဲ့ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Doemal ရဲ့ Rebate/ Redeem Feature ကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။...
ေရတံခြန္ေတာင္ Golf ကြင္းလမ္းက ေရၾကက္ေၾကာ္
မေႏၲလးကလူေတြအေနနဲ႔ ဒီေရၾကက္ေၾကာ္ဆိုတာေတြကို ရင္းႏြီးၿပီးသားျဖစ္မြာပါ။ မရင္းႏြီးေသးတဲ့သူေတြလဲသိသြားေအာင္ နည္းနည္းထပ္ၿပီးညႇြန္းပါဦးမယ္။ ကိုယ္ဟာ ၾကက္ေၾကာ္သိပ္ႀကိဳက္ေပမယ့္လဲ Lotteria တို႔ KFC တို႔ CP တို႔ခ်ည္းစားရတာရိုးေနၿပီဆိုပါစို႔။ ဗမာနည္း ဗမာဟန္ျဖစ္တဲ့...
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ခုခြင်းစီမှာ ရိုးရာပွဲတော် ဒါမှမဟုတ် သမိုင်းတွင်စေမယ့်နေ့တွေကို အစွဲပြုပြီး အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အများစုသိကြတာကတော့ ကရင်နှစ်သစ်ကူး၊ ကချင်ဆို မနောပွဲ၊ နာဂပွဲတော်၊ ရခိုင်သင်္ကြန်ပွဲ စတာတွေပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။...
၀န္ႀကီးမ်ားရံုးေဟာင္းထဲက Garden View ေလးနဲ႔ နန္းဆန္တဲ့ Cafe ဆိုင္ေလး
Garden View စတိုင်လေးနဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ ၀န်ကြီးများရုံးထဲက SY cafe လေးကိုရောက်ပြီးပြီလား။လေလေးတဖြူးဖြူးနဲ့ဆိုတော့ ကော်ဖီလေးလည်းသောက် စာအုပ်လေးလည်းဖတ်ရင်းဆို ဇိမ်ပဲ။ကော်ဖီကိုမျိုးစုံရတယ်။Americano လား၊ Latte လား လေဒီကြိုက်တာပြော...
11800 Ks တည္းနဲ႔ Hot Pot and BBQ အ၀စားလုိက္ၾကစို႕
Hot Pot နဲ့ BBQ ကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် အရမ်းကိုတန်တဲ့ ဆိုင်လေးပဲနော်။ဘူဖေး ဆိုတော့လည်း ပိုတောင် မိုက်သေးတယ်။ဘူဖေးအပြင် တခြား Side Dish တွေလည်း...
လုပ္ရလြယ္ျပီး ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်စ္ေတြကို ျပႏိုင္မယ့္ အစားအစာမ်ား
V Day ရောက်ဖို့ ဘယ်လောက်မှ မလိုဘူးနော်။ ၂ရက်ပဲလိုတော့တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အသဲတခြမ်း၊ နံရိုးတစ်ချောင်းကို ဘာပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပြီးပြီလဲ….??? ဘားဂျက်မရှိလို့ ဘာပေးရမလဲတွေးပူမနေပါနဲ့။ ဒီက နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ...
မႏၱလာေျမမွ ရုိဆန္ဆန္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား။
ချစ်သူရှိတဲ့သူတိုင်းရင်ခုန်ရတဲ့ ချစ်သူများနေ့ (Valentine Day) နေ့လေးကျရောက်ဖို့တော်တော့် ကိုနီးလာပြီနော်။ ကိုယ့်လူတို့ရော…ကိုယ့်ချစ်ချစ် အတွက် ဘာတွေများပြင်ဆင်ကြပြီးပြီလဲ…။ မန္တလာမြေက ချစ်တတ်တဲ့ ကိုကို၊ မမ တွေအတွက် V-Day...
Menu ဆန္းဆန္းေလးေတြနဲ႔ Halal ရတဲ့ ဆိုင္ေလး
Halal ဆိုပေမယ့် တရုတ်အစားအစာ နဲ့ ထိုင်းအစားအစာ ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ စိ်တ်ဝင်စားသွားလား။ဒီ့ထက်ပို စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ ရှိသေးတယ်နော် Doemal foodie တို့ရေ…….. ဆိုင်လေးက အေးအေးဆေးဆေးထိုင်လို့ရတဲ့အပြင် menu...